Vimba NeShoko RaMwari. Rarama Mariri
"Muve Shoko raMwari. Musangogumira pakurinzwa chete. Nokuti mukadero munenge muri kuzvinyengera. ... Asi munhu uya. Anotarisa mumurairo uya. Wakagadzirirwa vanhu vakasungunurwa. Achibva aushandisa pakurarama kwake. Asisiri munhu anongonzwa achikanganwa. Asi zvaanzwa izvi. Zvichizovonekwa pahupenyu hwake. Munhu iyeye. Acharopafadzwa muzvinhu zvose zvaanoita" (Jemusi 1 ndima 22 kusvika 25).
Shoko raMwari harishanduki. Harikundikani. Harina angapikisa. Shoko iri rinoita zvarinotaura. MuShoko raMwari ndimo mune zvinhu zvose. Ungada chishamiso. Shoko raMwari rinokuwanisa chishamiso ichi. Pangava nechaungada kugadzirisa. Shoko raMwari rinogona kugadzirisa chinhu ichi. Shoko iri ndiro ravanoshandisa kukuropafadza. Ndiko kusaka uchifanira kuva neShoko iri. Rinofanira kugara mumweya wako. Uye unofanira kuvimba naro. Unofanira kurishandisa pakurarama kwako.
Ungada kubatsirwa naMwari. Vanongokupa Shoko ravo. Ndiko kukubatsira kwavanoita. Ndizvo zvatinovona muna Mapisarema 107 ndima 20. Ndima iyi ine vanhu vainotaura nezvavo. Ava vanhu vakanga vari kutambudzwa. Vakanga vawomerwa. Asi ndima iyi inoti Mwari "Akatuma shoko rake uye akavaporesa; akavanunura kubva paguva". Mwari vakamboda kusimudzira Abhurahama. Vakangotaura mashoko kwaari. Tinoaverenga muna Genesi 17 ndima 5. Vakati, "Saka zita rako haricharambi richinzi Abhuramu. Richanzi Abhurahamu. Nokuti ndakakuita baba vemarudzi mazhinji zhinji".
Abhurahama uyu akanga asati ava nevana. Asi Mwari vaitomuvona sababa vemarudzi mazhinji. Ndizvo zvavakanga vamurongera. Asi vakangoita zvekuzvitaura nemuromo.
Asi Mwari vangataura mashoko kwauri. Izvozvo hazvirevi kuti zvavanenge vataura izvi zvinobva zvatoitika. Une zvaunofaniravo kuita. Unofanira kutanga wagamuchira mashoko aMwari aya. Ndiko kuti ugowana maropafadzo awo.
Shoko raMwari rine simba. Iwe unogona kushandisa simba iri. Asi unofanira kuva Shoko iri. Unofanira kurishandisa pakurarama kwako. Shoko iri rinofanira kuvonekwa pauri. Ndiko kuti rishande muhupenyu hwako. Ndiko kuti rikubatsire. Munhu anofanira kuva Shoko raMwari. Ndiko kuti awane maropafadzo aro. Shoko iri harifaniri kungogumira munzeve dzake chete. Izvi ndizvo zvatavona mundima yatavhura nayo. Iverenge zvekare.
Baba vandinoda. Ndinokutendai. Ndinorarama muShoko renyu. Ichi chiropafadzo chikuru. Shoko renyu rinonditungamirira. Rinondipa mazano ekurarama nawo. Mweya Mutsvene vanondibatsiravo nenzira iyi. Saka ndinorarama hupenyu hwamakandirongera. Ndinobereka zvibereko zvekururama. Ndichiita kuti mukudzwe saMwari. Muzita raJesu. Ameni.